बिर्सेर पनि यो दिशामा सिरानी लगाएर नसुत्नुहोस, घरमा हुनेछ अशुभ ! « Onlinetvnepal.com
बिर्सेर पनि यो दिशामा सिरानी लगाएर नसुत्नुहोस, घरमा हुनेछ अशुभ !
Published :6May, 2019 3:37 pm
तपाइ कुन दिशा पट्टी सिरान लगाएर सुत्नुहुन्छ । के सही दिशातिर त सिरानी लगाउनु भएको छैन कि । त्यसका तपाइको जिवनमा स्वाथ्यका साथै विभिन्न फाइदाहरु रहेका छन् । तर तपाइ भन्नुहुन्छ होला म अरु दिशातिर नै सिरान लगाएर सुत्छु त केही भएको छैन । त्यसो पनि हुन्छ तर सन्तुलित रुपमा फिट रहनका लागी यो निकै आवश्यक रहेको छ । हेरौ कुन दिशातिर सिरान गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सुरुवातमा पूर्व सिरानी ,पूर्व दिशामा सिरानी लगाएर सुत्दा कन्सन्ट्रेसन तथा मेमोरी पावर बढ्ने एवं मानव स्वास्थ्यमा यसले राम्रो प्रभाव पार्ने जनाइएको छ । बिशेषत विद्यार्थीवर्गहरूलाई यो दिशामा सिनानी लगाएर सुत्न फलदा हुने बताइएको छ ।त्यसैगरी पश्चिम सिरानी ,पश्चिम दिशामा सिरानी लगाएर सुत्नु पनि ठिकै मानिन्छ । यो दिशामा सिनानी राखेर सुत्नाले नाम, दाम तथा रिपुटेसन अनी समृद्धी प्राप्त हुने शास्त्रको दावी छ ।
त्यसैगरी उत्तर सिरानी सुत्ने समयमा उत्तर दिशामा सिरानी गर्दा विभिन्न रोग लाग्ने र समस्या आइलाग्ने हुन्छ । विशेष गरी मृत व्यक्तीहरूलाइ उत्तर दिशा तर्फ सिराने राखेर सुताइने गरिन्छ र बोक्ने गरिने भएकाले यसलाइ नराम्रो मानिन्छ ।त्यसैगरी दक्षिण सिरानी सुत्ने समयमा दक्षिण पट्टि सिरानी बनाउनु उत्तम मानिन्छ । दक्षिणबाट उत्तरी ध्रुवतर्फ प्रगतिशिल विद्युत प्रभाव भएको हुन्छ र यसले शरीरमा राम्रो उर्जा पैदा गर्छ । खाना पचाउन र मस्तिष्कको लागि पनि यो दिशाको सुताइ राम्रो मानिन्छ ।
त्यसैगरी अर्को कुरो ,बायाँ कोख सुत्ने गर्नुहोस् राति सुत्दा जहिले पनि बायाँ कोखो पल्टिएर सुत्नु राम्रो मानिन्छ । खासमा यो पनि बैज्ञानिक विचारमा आधारित छ । हाम्रो नाकबाट जुन श्वास बाहिर निस्कन्छ त्यसलाई स्वर पनि भनिन्छ । नाकको बायाँ छिद्रबाट श्वाश लिनु क्रियालाई चन्द्र स्वर भनिन्छ ।
दायाँबाट श्वास निस्कनु सूर्य स्वर हो । सूर्य स्वरले गर्मी पैदा गर्छ । बायाँ कोख पल्टिएर सुत्दा सूर्य स्वर निस्किन्छ । भोजन पचाउनका लागि पनि यो स्वर राम्रो मानिन्छ । मानव स्वास्थ्यकालागि यो सुताइ आवस्यक पनि छ । त्यस्तै सुत्दा जहिले पनि भोजन गरेको २ घण्टाभन्दा पछि मात्र सुत्नुका साथै दिशा पिसाव गरेर सुत्नुपर्छ ।